Kooxda Kubbada Cagta Ardayda Jaamacad Wales Ku Taala Oo Ay Man United Ka Wada Ciyaari Doonaan Europa League. - Gool24.Net
Kooxda ardayda jaamacada Cardiff Metropolitan University oo ku taal Wales ayaa markii ugu horaysya u soo baxday tartanka kooxaha Yurub ee Europa League.
Kooxda kubbada cagta ragga ee jamaacada Cardiff Metropolitan University oo loo yaqaan Cardiff Met ayaa guulaystay kulankii finalka ee isreeb reebka loogu soo baxay UEFA Europa League waxayna gaadheen heer layaableh.
Kooxda Jaamada Cardiff Metropolitan University ee Cardiff Met ayaa sanadihii la soo dhaafay wax yar ku seegay in ay Europa league u soo baxaan balse sanadkan riyadooda ayaa rumowday.
Kooxda Cardiff Met ayaa hadda diyaar u ah in ay kooxaha Premier League ee Man United iyo Wolves kala ciyaarto tartanka kooxaha Yurub ee Europa League taas oo ah sheeko layaableh.
In kooxda ardayda jaamacada Cardiff Metropolitan University ee Cardiff Met ay u soo baxday Europa League waxay ula micno tahay in ay ku guulaysteen lacag dhan £193,000 kun gini laakiin ardayda ciyaartoyda kooxdan ka ah ayaan wax lacag ah heli doonin.
Arday kasta oo ciyaartoy ka ah kooxda Cardiff Met ee jaamacada Cardiff Metropolitan University ayaa laga doonaya in uu bixiyo 150 gini oo ah lacagta xubinimada kooxda mana jirto lacag ay ku qaadanayaan.
Laakiin waxay ku faraxsan yihiin in ay markii ugu horaysay iyaga oo arday ah ay ka ciyaari doonaan Europa League oo ay waliba kala qayb gali doonaan kooxo waa wayn oo Yurub magac ku leh.
Inta badan ardayda ciyaartoyda ka ah kooxda Cardiff Met ee jaamacada Cardiff Metropolitan University waxay iskugu jiraan kuwo diyaarinaya shahaadooyinka PhDs iyo Masters Degree waxayna qaar ka mid ahi ka walwalsan yihiin waqtiga imtixaanaadkooda.
Sheekada layaabka leh ee jaamacada Cardiff Metropolitan University kuma koobna in kooxda ragga ee kubbada cagta Cardiff Met ay Europa League u soo baxeen balse koox dumarka ah ayaa wacdaro dhigaysa.
Kooxda ardayda kubbada cagta dumarka jamacada Cardiff Metropolitan University oo loo yaqaan Cardiff Met Women ayaa iyaguna u soo baxday tartanka kooxaha Yurub ee UEFA Champions League.
Laakiin kooxda ciyaartoyda ragga iyo dumarka jaamacada Cardiff Metropolitan University ayaa u baahan in ay marka hore ka soo gudbaan isreeb reebka UEFA Europa league iyo UEFA Champions league si ay heerka guruubyada u soo gaadhi karaan.
Cardiff Met waxay soo gali doonaan isreeb reebka Europa League oo ay markii taariikhda ugu horaysay ka ciyaari doonaan halka ardadayda dumarka ah ee kooxda Cardiff Met Women ay isreeb reebka Champions League soo gali doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, ardayda jaamacada Cardiff Metropolitan University ee ragga iyo dumarka ayaa taariikh cusub samaynaya waxayna rajaynayaan in ay u soo baxaan wareega guruubyada Europa League iyo Champions League.